စူပါလိဂ်၏စတုတ္ထပတ်တွင်ဂလက်စတာရေးသည်Kasımpaşa 1-0 ကိုရှုံးခဲ့သည်။ ဒီရှုံးနိမ့်သွားပြီးနောက်ဝေဖန်မှုအားလုံးသည်ရိုင်ယန်ဘဲလ်သို့ရောက်သွားသည်။
မိမိကိုယ်ကိုဝေဖန်မှုများ Ryan Babel “သင်အနိုင်ရတဲ့အခါကူညီတာကလွယ်ကူပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါသင်နဲ့အတူဘယ်သူလဲဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားသူတွေပြောတာကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ငါသိတဲ့တစ်ခုတည်းတစ်ခုကငါဒီကစားသမားအုပ်စုကိုယုံကြည်တယ်” တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Ryan Babel စကားလုံးများ “ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတူအနိုင်ရတဲ့မိသားစုတစ်စုဖြစ်တယ်။ ငါတို့ကစားသမားတွေအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှအဲဒီလိုပြောဖို့မလိုအပ်ဘူး။ ငါတို့နောက်တစ်ပွဲအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ဖို့ ၂ ပတ်လောက်အသင့်ရှိနေပြီ” ပုံစံဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်။
BETBABA100 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBABA138 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! SUPERBAHİS630 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! SUPERTOTOBET0120 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETPAS423 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ! BETBOO868 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ BETPAS423 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ RESTBET501 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ RESTBET501 BEŞİKTAŞ’A SÜRPRİZ RYAN BABEL ÖNERİSİ RESTBET501 KORONAVİRÜSE YAKALANAN RYAN BABEL’DEN İYİ HABER GELDİ
21 Comments on RESTBET501 RYAN BABEL’DEN ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ!
HABİP November 24, 2020 at 11:10 am
KENAN November 24, 2020 at 3:30 pm
ÖZGÜR November 25, 2020 at 3:00 am
ZEKERİYA November 25, 2020 at 10:00 am
SERKAN November 25, 2020 at 10:50 am
MAHMUT November 25, 2020 at 11:20 am
SAMET November 25, 2020 at 2:00 pm
ECEVİT November 25, 2020 at 10:00 pm
ÇAVLAN November 26, 2020 at 12:20 am
ÖZLEM November 26, 2020 at 5:00 am
YUSUF November 26, 2020 at 10:10 pm
İNANÇ November 27, 2020 at 1:20 am
SİBEL November 27, 2020 at 2:10 am
NEVAL November 27, 2020 at 4:20 pm
YAKUP İLKER November 27, 2020 at 7:20 pm
TUĞÇE November 28, 2020 at 5:10 pm
ENES November 28, 2020 at 6:00 pm
CİHAN November 29, 2020 at 1:00 am
BİRSEN November 29, 2020 at 10:10 am
DİDEM AYŞE December 5, 2020 at 7:10 am
BARAN December 5, 2020 at 9:50 pm